အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး နီးစပ်နေပြီလို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ပြောဆို — မြန်မာဌာန
ရထား ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နဲ့ RCSS SSA ရှမ်းပြည် တပ်မတော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွတ်စစ် နဲ့ အဖွဲ့တို့ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေစဉ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အင်အားကြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ ဖြစ်တဲ့ KNU, KNPP, CNF တို့နဲ့လည်း မြန်မာအစိုးရရဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ (Photo courtesy of Tai Freedom)
KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး အပြင် SSA ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း အဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်က ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်မှာ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။
KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုဟာ ပဏာမ အဆင့်လို့ KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Naw Zippora Sein က ပြောပါတယ်။
အလားတူ RCSS SSA ရှမ်းပြည် တပ်မတော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွတ်စစ် နဲ့ အဖွဲ့ဟာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလောင်ဆိုင်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“နဂိုကတည်းက ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် မကျေလည်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာကြဖို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ကြေညာခဲ့ပြီးသားပါ။ အစိုးရကလည်း ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ကလည်း သမ္မတကြီးထံ အကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်”
SSA ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းအနေနဲ့ လာမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းမှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း အာရ်အက်ဖ်အေ ကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှာ ရထား ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ရန်ကုန် အခြေစိုက် EGRESS အဖွဲ့က ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင်၊ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်၊ ငါးလုပ်ငန်းက ဦးတင်မောင်သန်းတို့ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်မြောက်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးသူက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး သမ္မတ စပ်ရွှေသိုက်ရဲ့သား ဥရောပ အခြေစိုက် Euro-Burma Office တာဝန်ခံ ဦးဟန်ညောင်ေ၀ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဟာ KNU နဲ့SSA တောင်ပိုင်း အပြင် KNPP ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ၊ CNF ချင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
Actually UNFC hould request self-determination like UWSA.
....ရွမ္းတိုင္းရင္းသားအားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုရင္......ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ ့သေဘာထားေမးျပီးမွဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တယ္...ေျမာက္ပိုင္းမွာဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာရယ္...ရွမ္းတိုင္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဦးခြန္ထြန္းဦးေကာခုထိခ်ဳပ္ေနွာင္ခံထားဆဲဒါေတြကိုၾကည့္ျပီးေတာ့ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တယ္...စစ္ျဖစ္ေစခ်င္လို ့ေတာ့မဟုတ္ပါ...က်ေနာ္ကေတာ့လံုး၀သေဘာမတူပါ.
စုိင္းဟန္မိန္း ေျပာသလုိပဲ လုံး၀သေဘာမတူႏုိင္
ဘူး ... ဦးခြန္ထြန္ဦးကုိပဲ အရင္စဥ္းစားႀကည့္ပါ
အုံ ့... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိ မႀကည့္ႏွင့္
ဒါက သူတုိ ့လူမ်ဳိးခ်င္းခ်င္း .. နားလည္မွု ရွိ
ႀကပါလိမ့္မယ္... တျခားလူမ်ဳိးဆုိေတာ့ ႏုိပ္
ကြက္ဖုိ ့တာ အဆင္သင့္ပဲ .. သူတုိ ့က အကြက္
ဆင္ျပီးေခၚေနတာပါ ... ဒါကုိ စဥ္းစားေစခ်င္